अन्तराष्ट्रिय उडानमा बढी भाडा लिइएको बारे छानविन गर्न समिति गठन, होला त कारवाही ? – Mission Khabar
अन्तराष्ट्रिय उडानमा बढी भाडा लिइएको बारे छानविन गर्न समिति गठन, होला त कारवाही ?
मिसन खबर ८ असार २०७८, मंगलवार ००:३४
काठमाडौं । नेपालमा अझ पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान रोकेर चार्टर्ड उडानलाई नै प्रोत्साहन गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर कम भइरहदा र विदेशमा व्यापक खोप अभियान चलेको भएपनि नेपालमा नियमित उडान बढाउने बारे सरकार अनिर्णित देखिएको हो ।
चार्टर्ड उडानमात्रै भैरहेको यही मौकाको फाइदा उठाउँदै केही ट्राभल एजेन्सीले चर्को भाडा असुलेको गुनासो यात्रुबाट बढेपछि सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ । समितिले गुनासोबारे छानविन गरि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कानूनी कारवाहीको सिफारिस गर्नेछ । सरकारले १९ वैशाखबाट टर्की र कतारमा नियमित उडान खोलेको छ । भारतमा यसअघि पनि उडान खुला थियो ।
लामो समयदेखि नियमित उडान रोकेको सरकारले यसबीचमा नेपालमा महामारी नियन्त्रणमा समेत ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । यसै मौकामा व्यापारीहरुले यात्रुबाट चर्को मूल्य असुल गरेको गुनासो बढिरहेको छ । बारम्बार टिकटमा ठगिएको बारे गुनासो गर्दा समेत छानविन र कारबाही हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
क्याटेगोरी : ओझेलका पात्र, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश, यातायात / यात्रा